Aluminium Foil isi nri tree, Aluminium Oval Platter, Foil apụta - Jiahua
Nabata Allwin Mkpọ
Udo na nkasi obi
Allwin Pack emi odude ke Beijing nke China, nke bụ a mbara nri nkwakọ enterprise, pụrụ iche na aluminum foil akpa, plastic containers, ebu Ọdịdị imewe na mmepe, n'ibu akpaaka R&D, ahịa na ndị ahịa ọrụ dị ka otu n'ime Integrated ụlọ ọrụ. Allwin Pack si n'ichepụta isi dị na Hebei, Tianjin, Shandong na Guangdong, anyị nwere 30,000 square mita smart ájá-free nhazi omumuihe, na akpaka robot akpaka nnara nkwakọ ngwaahịa na akpaka ahihia mgbake na imegharị ihe maka iji usoro. akụrụngwa nnyocha na arụmọrụ ule laabu, ebu imewe laabu, anyị mepụtara na-anwale fọrọ nke nta ka otu puku nke ezi nhazi Ebu dị ka onye ndú na nke a ụlọ ọrụ.
Anyị na-eji ihe karịrị 20 isi patent teknụzụ dị n'ọhịa aluminom na-arụ ọrụ iji mejupụta ọtụtụ oghere teknụzụ nke ụlọ ọrụ
7 8 9 inch gburugburu Pan
Aluminum Foil nkwakọ
BBQ imi ihe
Ezinaụlọ Aluminom Foil
Ogbe achịcha Pan
anyị na-eji aluminum foil ngwaọrụ nke nke mba n'ozuzu, environmentally friendly na elu-edu na-enye ndị ahịa dị iche iche na aluminum foil containers, wepụ aluminum foil maka isi nri, ezinụlọ aluminum foil mpịakọta na ndị ọzọ na usoro nke ngwaahịa
Oval akpa OV460
12, Umengwụ Susan Cater tree PZ12-C
Kitchen Foil fenda WL840-320
7 Inch Now Pan RO775F
Nnọọ ajụjụ Allwin Pack
15 afọ ọkachamara na-emepụta ihe iji gboo mkpa gị nke ngwaahịa Aluminium na-enweghị ihe ọ bụla, S Nlele n'efu maka nyocha
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị ji ahọrọ ihe mpempe akwụkwọ aluminom karịa akpa rọba?
A na-eme aluminom aluminom site na alloy nke ala alloy mgbe ọtụtụ usoro nke ịgbagharị, ya onwe ya na-enweghị ọla dị arọ na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. kpọtụrụ ...
1.All ụdị nkọwa, nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa ina. Nha na omimi nwere ike ịhọrọ - inwe ike ime ihe dị iche iche achọrọ. 2. Food ọkwa foil akpa mma site FDA na KOSHER. Nchedo na ahụike, site na izu oke ịgba ọgwụ. Dị ka ọ kwesịrị ịkpọtụrụ ...
Ee, nsogbu adịghị. Jide n'aka na akpa ahụ mepere emepe, gbochie ikpo ọkụ na-agbasa na nkwekọrịta oyi na-akpata mgbawa, anaghị eji ihe ndị nkịtị dị ka arịa dị na oven microwave, ọ ka mma iji ngwugwu na-eguzogide okpomọkụ. 1, zere ime plastik ihe nkiri na kọntaktị na nri: mgbe ị na-eji ihe nkiri ọhụrụ, na kpo oku p ...